Category:IAstronomi - Wikipedia
Astronomy (ngeenkwenkwezi, UK: ngeenkwenkwezi, Germany: Astronomie, Sternkunde, orchid: astronomie (astronomia) sterrenkunde (sterrekunde) French: astronomie), ezifana nesenzeko yasezulwini yaye ngeenkwenkwezi, ukwakhelwa ngezenzeko zendalo ezithe zenzeka kweli Umhlaba ngaphandle komthetho enye indawo lenzululwazi zendalo ukwenza loo izovela. Kwaye ikakhulu lokubeka ngeenkwenkwezi, ukukhanda yasezulwini, baziwa yokuma. Ngokuma kwaye bafunde yonke (theory Amechu, UK: ngokuma) kwaye kunxulumene kakhulu, der ezahlukeneyo zemfundo i Philosophy kunye nemvelaphi.
I-Astronomy yintsimi yokufunda eyenziwa kwimihla yakudala njengoko isayensi yesayensi ihamba phambili. Inkcubeko ngexesha kokubhalwa kwembali, bashiya ilifa ngeenkwenkwezi, ezifana ezikhumbuzo kunye iiphiramidi Nubian yaseYiputa yamandulo. Kwakhona kwenzeka kamsinya emva impucuko, waseBhabhiloni yamandulo yamaGrike, ezifana China yamandulo kunye Indiya yakudala, kwaye nkqu ezifana Iran kunye impucuko yamaMaya, uyiqwalasela kakuhle isibhakabhaka ebusuku iye yenziwa.
Nangona kunjalo, ukuze astronomi kukuba lujoyine bezenzululwazi ayizange kubaluleke kukuba kokusungulwa kweteleskopu. Ngokwembali, kumaziko emfundo ephakamileyo ngeenkwenkwezi, kodwa ndiyayithanda izikhundla isayensi kakuhle ezohlukeneyo navigation yasezulwini Le ngeenkwenkwezi kunye nekhalenda iinkqubo lokuqwalasela, ngokufuthi waqonda njengoko sesayensi nelithi neengcali ngeenkwenkwezi kwiminyaka yakutshanje.
Astronomy (isayensi), indawo kunye nehlabathi ngabantu zeziganeko imizimba yasezulwini kuyimfuneko ukunikela ingqalelo ukuze singabi mazingabhidaniswa ukuvumisa inkqubo yenkolo, nto leyo isekelwe kwibango ukuba kukho unxulumano. Ezi zaye zaphuhliswa ukusuka imvelaphi efanayo, kodwa ngoku eyahlukileyo ngokupheleleyo.
Retrieved from "https://xh.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:IAstronomi&oldid=30101"
Last edited on 21 EyoMdumba 2019, at 21:07
This page was last edited on 21 EyoMdumba 2019, at 21:07.